on: 28 Dec, 2017
နှင်းခူဟာ အဖြစ်အများဆုံး အရေပြားရောဂါတွေထဲက တစ်ခုပါပဲ။ ဆေးပညာအရ Neurodermatitis (သို့မဟုတ်) Lichen Simplex Chronlcus လို့ ခေါ်တယ်။ အရေပြားမှာရှိတဲ့ အာရုံကြောတွေဟာ တစ်ချိန်လုံး နှိုးဆွခံနေရပြီး ယားလိုက်၊ ကုတ်လိုက်၊ ပြန်ယားလိုက်နဲ့ သံသရာလည်နေတယ်။ အလွန်ကြာရှည်တဲ့ နာတာရှည် ယားနာလိုမျိုး ထပ်ခါထပ်ခါ ကုတ်တာကြောင့် အရေပြားက သားရေလိုထူနေပြီး အသားအရောင်ကလည်း နဂိုထက် မည်းနေတယ်။လက္ခဏာတွေ&nbs...
အိုမင်းမှုကို ဖုံးကွယ်ပေးမယ့် အလှကုန်သစ်စမ်းသပ်
on: 21 Dec, 2017
အသက်အရွယ်ရလာရင် အသားအရေတွေက သတိပေးလာကြတယ်။ တင်းရင်းနေတဲ့ အရေပြားက အိကျလာပြီး အရေးအကြောင်းတွေ ပေါ်လာကြတယ်။ မျက်စိရဲ့အောက်တွင် အိတ်သဖွယ် တွဲကျလာခြင်းကလည်း အိုမင်းလာပြီဖြစ်ကြောင်း သတိပေးလာကြတယ်။ ဒီလိုပေါ်လာတဲ့ ဇရာရဲ့လက္ခဏာတွေကို ပြေပျောက်စေဖို့ အမျိုးမျိုး ကြိုးစားကြတယ်။ အထူးသဖြင့် အမျိုးသမီးတွေ များပါတယ်။ အရေးအကြောင်းပေါ်စက သေးငယ်သေးလို့ မိတ်ကပ်အမျိုးမျိုးနဲ့ အကာအကွယ်ယူကြ၊ ဖြေဖျောက်ကြ...
ဝက်ခြံပေါက်စေတဲ့ အကြောင်းကိစ္စတွေက အများကြီးပါ။ အရေပြားထဲက အဆီအိတ်နဲ့ အဆီပြွန်လမ်းကြောင်း ရောင်ရမ်းလို့ဖြစ်ရတဲ့ ဝက်ခြံဟာ တကယ်တော့ အကြောင်းကိစ္စပေါင်း မြောက်မြားစွာနဲ့ ဆက်နွှယ်နေတာပါ။ အထူးသဖြင့် အမျိုးသမီးတွေမှာ ပိုလို့တောင် များပါတယ်။ အလှပြင်ပစ္စည်းတွေကြောင့်လား၊ ကိုယ်ဝန်တားဆေးတွေကြောင့်လား စဉ်းစားစရာတွေပါ။ နောက်တစ်ချက်က အတွေ့ရမများတဲ့ PCOS ဆိုတဲ့ ရောဂါစုကြောင့်လည်း ဝက်ခြံပြဿနာဟာ အမျိုးသမီးတွေမ...
on: 12 Dec, 2017
လူတိုင်းမှာ မှဲ့ရှိတယ်။ တစ်ခါတလေ လေးငါးဆယ်အထိ၊ ရာကျော်အထိလည်း ရှိတတ်တယ်။ လူများစုအတွက် မှဲ့ဆိုတာ အညိုရောင်အစက်ကို ပြောတာကို။ တကယ်တော့ မှဲ့ဟာ ပုံစံအသွင်သဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ တကယ်တော့ မှဲ့ဟာ ပုံစံအသွင်သဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ ရှေးခေတ်တုန်းက မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ ပါးမှာ မှဲ့ရှိရင်ပိုလှတယ်။ ဖက်ရှင်ကျတယ်လို့ ယူဆခဲ့ကြဖူးတယ်။ တချို့ဆိုမှဲ့အတုတောင် ပါးမှာဆိုးကြခဲ့သေးတာပေါ့။ မှဲ့ဆိုတာ အလှအပရဲ့ အမှတ...
on: 04 Dec, 2017
သံလွင်ဆီ ခြောက်သွေ့ပြီး ထိခိုက်လွယ်သော အရေပြားအတွက် အထူးကောင်းမွန်ပါတယ်။ အရေးအကြောင်းထင်ရှားခြင်းကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီး အာနိသင်ရှိသော Moisturizer တစ်မျိုးအနေဖြင့်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အရေပြားကို နူးညံ့ချောမွေ့စေနိုင်ပါတယ်။ စပျစ်သီးအဆီ မျက်နှာပြင် အဆီထုတ်လုပ်မှုကို ထိန်းညှိပေးနိုင်ပါတယ်။ အဆီပြန်သော အရေပြားပိုင်ရှင်များအတွက် အထူးသင့်...
သာမန်အရေပြားအတွက် ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်များ
on: 27 Nov, 2017
ရှောင်ရန်၁။ ဆေးလိပ် လုံးဝ မသောက်ပါနှင့်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကြောင့် အရေပြားရှိ တစ်သျှူးများပါးလွှာလာတာ အရေးအကြောင်းများကို ထင်ရှားလာစေနိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ မိမိသည် ဆေးလိပ်သောက်သူဖြစ်ပါမူ ချက်ချင်းရပ်ပစ်ပါ။၂။ နေလောင်မခံပါနှင့်နေရောင်ခြည်၏ UV အလင်းတန်းများကြောင့် အရေပြားတွန့်ခြင်း၊ အရေပြားပျက်စီးခြင်းတို့သာမက အရေပြားကင်ဆာထိတိုင်အောင် ဖြစ်ပွားစေန...
Face mask လေးကိုယ်တိုင်လုပ်မယ်
ယနေ့ခေတ်မှာ အရေပြားကျန်းမာလှပမှုကို အလေးထားလုပ်ဆောင်လာကြပါပြီ။ တိုးတက်လာတဲ့ခေတ်နဲ့အညီ စိတ်ဖိစီးမှု နေလောင်ဒဏ်ခံရမှု၊ နိစ္စဓူဝ လုပ်ငန်းဆောင်တာများ များပြားမှု၊ အချိန်နဲ့ တပြေးညီ လှုပ်ရှားရုန်းကန်နေရမှုတို့ကြောင့် ကျန်းမာလှပမှုအတွက် သီးသန့်အချိန်ပေးဖို့ ခဲယဉ်းလာပါတယ်။ လွယ်ကူရိုးရှင်းပြီး ကိုယ့်ရဲ့လက်တစ်ကမ်းမှုရှိတဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်း ၂ မျိုးတည်းနဲ့ အိမ်တွင်းမျက်နှာကပ် ပေါင်းတင်နည်းလေးတွေ ပြောပြပ...
အရေပြားနီရဲတဲ့ ရောင်ရမ်းနာဖု အရောင်ဖြစ်ပေါ်မှု
အသားအရေနဲ့ ဆံပင်ပေါ်မှာ ရောင်ခြည်ဓာတ်ကြောင့် အရောင်ဖြစ်ပေါ်လာတာပါ။ အသားအရောင် မမှန်တာတွေကတော့ နေရောင်ခြည်နဲ့ အရေပြားရဲ့ ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေ နှစ်ကြာလာတာနဲ့အမျှ ပေါ်လာတတ်တာဟာ ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ် သမရိုးကျလို့တောင် ဖြစ်နေပါတယ်။ လူတိုင်းရဲ့ အရောင်မှာ အသားအရောင်ကို ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ ရောင်ခြည်ဓာတ် ပစ္စည်းဆဲလ် (Pigment – producing cells) လေးတွေ ပါရှိပါတယ်။ မယ်လင်နိုဆိုက်စ် (melanocytes) လို့လည်း ခ...
မိတ်ကပ်မပါဘဲ အလှပဆုံးပြင်ဆင်ထားတဲ့ ပုံစံလေး ရဖို့က မိန်းကလေးတိုင်းရဲ့အိပ်မက်ပါ။ ကျန်းမာပြီး သဘာဝအတိုင်းလေး အမြဲလန်းဆန်းလှပစေဖို့ကိုယ့်ရဲ့အနေအထိိုင် ၊အစားအသောက်၊ အပြုအမူလေးတွေပြောင်းပြီး ကိုယ့်အိပ်မက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်လိုက်ကြရအောင်ပါ။ (၁) နေရောင်ခြည်နဲ့အဝေးသို့....နေခြည်နုနုလေးတွေ( နံနက်ခင်း အစောပိုင်း ချိန်) ဟာ အသားအရေကို ကျန်းမာစေဖို့အထောက်အပံ့ပေးသော်လည်း နေ...
on: 23 Oct, 2017
၁. အသားအရေ ဖြူဖပ်ဖြူရော်ဖြစ်ခြင်းဖိစီးမှုများကြောင့် အားအင်လျော့နည်းနေတဲ့ အဆုတ်၊ နှလုံးနှင့် ဦးနှောက်များဆီကိုသွေးများ ပိုလွှတ်ပေးရတဲ့အတွက် အရေပြားဘက်ဆီကို သွေးအသွားအလာနည်းသွားစေတာကြောင့် အသားအရေ အရောင်အဆင်း ဝပ်ဆင်းသွားရတာ ဖြစ်ပါတယ်။၂. ဝက်ခြံများ ထွက်ပေါ်လာခြင်းစိတ်ဖိစီးမှုများတဲ့အခါ အဆီအိတ်တွေက အဆီဓာတ်ကို ပိုပိုထုတ်လွှတ်ပေးပါတယ်။...